Shina: Mampatahotra ny miseho amin’ny tena anarana amin’ny aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Mey 2009 11:15 GMT
Lasa sehatra manan-danja fanaovan'ny olona politika sy fitsikerana mpitondra ny aterineto any Shina. Voaantoky ny fanafenana anaran'ny mpampiasa azy amin'ny ankapobeny ny fahalalahan'ny aterineto. Na izany aza dia tsy nitsahatra mihitsy ny fitadiavana hanohintohinana io fahalalahana io. Vao tsy ela akory izay dia nosamborina noho ny fiampangany ny tompon'andraiki-panjakana tao amin'ny toerana nisy azy ho manao kolikoly ny tovolahy iray any Shanghai. Ny tena mahatalanjona amin'ity raharaha ity dia nandeha an-jatony kilaometatra mihitsy ny polisy tany an-toerana hisambotra azy rehefa fantany ilehio fa mpamaham-bolongana.
Nalaza tamin'ny aterineto nandritra ny andro vitsivitsy izay ny lahatsoratr'i West-of-Lake-West. Nohazavain'ny bolongana tamin'ny antsipiriany tanaty lahatsoratra vitsivitsy ny lalàna vaovao izay hampiharina manomboka ny voalohan'ny volana mey. Nantsoina hoe ‘Fehezan-dalàna ho fiarovana ny fanomezam-baovao an-tsolosaina sy an'aterineto’ (计算机信息网络安全保护管理条例) ny volavolan-dalàna izay nolanian'ny antenimieran'ny tanàna.